Faritra Atsinanana : Mihetsiketsika ny antoko HVM -
AccueilSosialyFaritra Atsinanana : Mihetsiketsika ny antoko HVM
12/03/2018 admintriatra Sosialy 0
Manana ny maha izy azy ny antoko HVM any amin’ny Faritra Atsinanana. Efa tafapetraka manerana ny distrika miisa 7 ny rantsa-mangaika. Io ilay antsoina hoe Bureau Inter Communale Hvm, izay efa tafapetraka ao amin’ny distrikan’i Toamasina 1 ; Toamasina faha-2 . ; ny ao amin’ny distrikan’i Brickavile ; ny distrikan’i Vatomandry ; ny distrikan’i Mahanoro ; ny distrikan’i Marolambo ary ny distrikan’i Tanambao Manampotsy . Samy ahitana mpiara-miasa miisa dimy avy ny BIC isaka ny kaominina iray, izay ahitana tompon’andraikitra voalohany sy mpanolotsainy ; misy ny mpanara-maso ny fitantanana ary ny mpanatanteraka sy ny hafa . “ Raha ny fantatra dia ity BIC ity no hasolo ireo delege teo aloha sy hanatanteraka indray ny vinan’ny fisandratana sy fampandrosoana ifotony ; ka mbola hapetraka tsy ho ela ihany koa ny eny anivon’ny fokontany”, hoy Talata Michel, mpandrindram-paritry ny Hvm Faritra Atsinanana.
Tsiahivina moa fa ny lehiben’ny Faritra Atsinanana amin’izao fotoana, ingahy Talata Michel no voatendrin’ny foibe ho mpandrindram-paritry ny Hvm ao amin’ny Faritra Atsinanana.
Vonona ny tenako hoy izy, hizara ny fahaiza-manao sy traikefa efa nananako hahavitako ny adidy nankinina tamiko. “Vonona ny hifanome tanana sy hifanohana amin’ny fampandrosoana araka ny vina fisandratana 2030 napetraky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izahay”, hoy Talata Michel, lehiben’ny Faritra Atsinanana no sady mpandrindram-paritry ny Hvm Faritra Atsinanana.
Vehivavy HVM faritra Atsinanana
Tsy latsa-danja amin’izany koa ny vehivavy Hvm. Mijoro ara-dalàna ny vehivavy Hvm, ary manana ny maha izy azy ihany koa. Tamin’ny fanaramarihana ny andron’ny vehivavy teo, dia nanatanteraka filaharambe tao Brickaville izy ireo. Nanatrika izany ny Lehiben’ny Faritra Atsinanana, Talata Michel sy ny solombavambahoaka voafidy tao Brickaville, ny Prefen’ny Toamasina ary ireo olo-manan-kaja sivily sy miaramila maro.
Nandray ny andraikiny avy hatrany koa ny HVM sy ny Faritra Atsinanana tamin’ny alalan’ny fanadiovana faobe tao an-tampon-tanànan’i Toamasina. Nitarika izany moa ny lehiben’ny Faritra sady mpandrindram-paritry ny Hvm, ingahy Talata Michel. Naseho tamin’ny vahoaka fa antoko velona sady matanjaka ny Hvm ao Toamasina.